देवेन्द्र विश्वकर्मा - साप्ताहिक
देवेन्द्र विश्वकर्माका लेखहरु
देवेन्द्र विश्वकर्मा, वैशाख २९, २०७६
विदेशमा समस्या त धेरै छन्, तैपनि यहीँबाट खुशी लिएर जानेहरू पनि उत्तिकै छन् । युरोप–अमेरिकातिर त धेरै नेपालीले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् भने मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा आउने धेरै नेपाली विभिन्न कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् र उनीहरूले काम पनि सिकिरहेका छन् ।
विदेशमा काम गर्न आउँदा यी विषयमा ख्याल गर्नुहोस्
देवेन्द्र विश्वकर्मा, चैत्र १३, २०७५
जुन देशमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो देशमा नेपाली दूतावास छ–छैन ? छैन भने कुन देशको नेपाली दूतावासले हेर्छ ? बुझ्नुहोस्, राजदूतको नाम तथा फोन नम्बर लिनुहोस् र घरपरिवारमा पनि जानकारी दिनुहोस् ।
देवेन्द्र विश्वकर्मा, माघ २१, २०७५
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनहुँ एक न एक जना यस्तै रातो बाकसमा फर्किरहेका हुन्छन् । यता दिनहुुँ सयौं युवा आफ्नो सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै बिदेसिरहेका छन् । पैसा कमाउँला, साहूको ऋण तिरौंला, सानो घर बनाउँला, छोराछोरी पढाउँला अनि परिवारलाई खुसी र सुखी बनाउँला भनेर ।